Argagixiye Sweden ku noolaan jiray oo Beljim lagu diley - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Argagixiye Sweden ku noolaan jiray oo Beljim lagu diley
La daabacay fredag 18 mars 2016 kl 13.12
Wiilkii argagixisada ahaa ee ciidammada Beljimku dhowaantan ku dilen magaaladaasi ayaa lagu soo warramey inuu in muddo ah ku noolaa Sweden. Sida ku cad qoraal ay gacantaku higtay idaacadda la iska daawado ee Sky News.
Sida ku cad war laga soo xigtay telefishanka Sky News in ninka magaciisa uu ku jiray diiwaan magacyo 22 000 oo ruux gaarsii-san ee xubnaha Daacish oo idaacaddu ka heshay shakhsi ka soo baxsaday muddo ey iminka ka soo wareegtey dhowr toddobaad.
Ninkan ayaa la qiyaasayaa inuu Sweden ka tagay gu’gii 2014, isagoona u baqooley dalka Isbaaniya oo uu uga sii baqoolay Jarmalka, dabadeed Faransiiska oo uu ka aaday waddanka Turkiya halkaasina oo uu ka sii galay magaalada Tel Abyad oo dhacda waqooyiga dalka Suuriya oo gaaray 19-kii bishii abriil 2014.
Qoraalka uu telefishanka Sky News gacanta ku dhigay ayaa lagu soo warramayaa inuu ku caddaa in ninkaasi uu ku talo jiray inuu is qarxiyo goor ay noqotaba.
Ninkan ayaa illaa hadda ka diiwaan-gashan diiwaanka bulshada ee Stockholm.